Achọba njem njem na-aba ụba, BUDO setịpụrụ ọkọlọtọ na bọs n'oké osimiri | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaỌchịchọ nke ndị njem na-abawanye, BUDO na-eweta ọkọlọtọ maka ụgbọ ala
Ọchịchọ nke ndị njem na-abawanye, BUDO na-eweta ọkọlọtọ maka ụgbọ ala
03 / 02 / 2014 16 Bursa, Ahmet Emin Yılmaz, General, Isi akụkọ, Turkey, dere
Ọchịchọ njem na-abawanye, BUDO setịpụrụ ụkpụrụ maka ụgbọ ala ụgbọ mmiri: Istanbul adịghị anya dị ka ọ dị na mbụ. Na mgbakwunye na njikọta, ogo nke ụgbọ njem amụbaala. BUDO, nke bụ naanị nke fọdụrụ n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri Kabataş-Mudanya, na-ewelite ọkọlọtọ nke ụgbọ mmiri ahụ iji bulie ogo ụgbọ mmiri. Ọzọkwa, ọ bụ mkpebi dị mma iji bulie ya gaa n’etiti obodo, mana ọnọdụ ahụ dịkwa mkpa…
Ruo mgbe na-adịbeghị anya, ịgaga Istanbul na ịlaghachi azụ ka a na-atụle nsogbu nke njem.
Tupu ị gaa Istanbul, ọ dị mkpa iji ruo Yalova. Yazọ Yalovu dị warara ma sie ike. Mgbe nke a gasịrị, ha nwere nhọrọ nke ịga n'ihu na ala na ịgagharị na Ọwara, ma ọ bụ ịbịaru Karaköy na 06.15 kwupụtara site na Yalova.
Ugbu a ọ bụghị ikpe…
Toga njem ma ọ bụ site na Istanbul dị mfe ugbu a. Ma n'okporo ụzọ abụọ na bọs dị elu na-aga njem, kama ịga leta Gulf of Izmit Topçular-Eskihisar ụgbọ mmiri.
Otú ọ dị Buna
Thezọ ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ nke İDO dị n'etiti Yenikapı na Güzelyalı belatala ma weta mma njem. Mgbe Kabataş-Güzelyalı ụgbọ ala gbakwunye na nke a, ịlaghachi Istanbul abụghị ihe dị iche karịa ịga mpaghara ọ bụla site na etiti Bursa.
Mgbe BUDO, nguzobe nke Obodo ukwu, wetara asọmpi na ọrụ ụgbọ ala nke IDO, ogo njem njem mụbara ọnụ ahịa tiketi.
IDO, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ya, enweghị ike ịnagide ọnụahịa tiketi dị ala ma pụọ ​​na akara ụgbọ ala Kabataş-Güzelyalı.
İDO amalitela ụgbọ elu Güzelyalı-Armutlu-Kadıköy-Yenikapı.
BUDO atụghị anya na oge mwepu nke IDO n'ihi ụba ndị njem nọ na ya, oge a nwekwara nsogbu dị iche iche.
Dị ka ihe atụ ...
Shipsgbọ mmiri BUDO nwere ụfọdụ mkpesa banyere njem ahụ. Kedu ihe ọzọ, nkwupụta na enwere ọtụtụ ndị njem n'oge ọrụ nnapụta ụgbọ mmiri n'ihi mbibi ọhụụ.
Anyị gwara Levent Fidansoy, onye isi njikwa nke Burulaş, nke BUDO nwere njikọ. Nke mbu, anabataghị nkwupute ndị njem na-agafe. Mana ọ rụtụrụ aka:
“Ụgbọ ala IDO n'oké osimiri nwere ikike njem njem nke 450. Shipsgbọ mmiri anyị nwere otu ike. Mana anyị emeela oche 370 maka njem dị mma. Ya mere, enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịbụ ndị njem karịrị akarị. ”
O nyekwara ozi:
“Mgbe mmụba nke ike ndị njem anyị, BUDO na-atụgharị ngwa ngwa ma melite ụkpụrụ ya. Anyị na-arụ ọrụ anyị niile site na ịtụle nchekwa ndị njem na afọ ojuju. Anyị kwenyesiri ike na nke a. ”
Isi: Ahmet Emin YILMAZ - www.olay.com.t bụ
Nnukwu ego sitere na Schaeffler maka inye ya ọkọlọtọ
Nleta ị nweta: National Train Project Standard Toilet…
Ngosipụta ọmịiko: Nchịkwa ụgbọ oloko nke National na…
IMM na-eweta ndị ọsụ ụzọ nke Smart Cities Ọnụ
Mmekọrịta, Nationalnụ na Ndị Isi Mba ı
Ụgbọ mmiri Budo mmiri
Ụgbọ mmiri BUDO
BURULAŞ General Manager Levent Fidansoy
Ramiye ụgbọ ala ha Habiblere Metro
Ụgbọ ala Cable nke ụgbọ ala na-agbada na etiti obodo, mana ebe ahụ dị mkpa